कुलमानपछि को बन्दैछ विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख ? ऊर्जमन्त्री पुनका प्रेस सल्लाहकारले खोले यस्तो रहस्य — Imandarmedia.com
कुलमानपछि को बन्दैछ विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख ? ऊर्जमन्त्री पुनका प्रेस सल्लाहकारले खोले यस्तो रहस्य
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कुलमान घिसिङको कार्यकालको आज अन्तिम दिन हो । उनले चार वर्ष पहिले भदौ २९ गते कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्ति पाएका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल ४ वर्ष हुन्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई फेरि नियुक्त गर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ । उक्त प्रस्ताव आजै वा भोलि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ । ऊर्जमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको उनका प्रेस सल्लाहकार दयानिधी भट्टले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई फेरि जिम्मेवारी दिने सहमति भइसकेको छ । मन्त्री पुनले सोहीबमोजिम चार वर्षका लागि घिसिङलाई नै कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रस्ताव तयार पारेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली, अध्यक्ष दाहाल र मन्त्री पुन निकटका स्रोतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई दोहोर्‍याइने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मन्त्री पुनले जसलाई अगाडि बढायो उसैलाई स्वीकार गर्ने र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुनै व्यक्ति नभएको बताएका छन् । कुलमानको सचिवालयका अनुसार आइतबार पनि उनले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेका छन् ।
यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् बैठक भने बसेको छैन । पछिल्लोपटक भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । त्यसपछि भदौ २५ गते बोलाइएको बैठक २६ गतेका लागि सरेको थियो । २६ गते नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकका कारण स्थगित भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ । सम्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानबारे निर्णय हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने सूचना भने आइतबार ४ बजेसम्म नआएको एक मन्त्रीले बताए । त्यस्तै, सरकारको प्रवक्ता र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्नेबारे पनि पनि भोलिको बैठकले निर्णय गर्नसक्ने बताइएको छ ।
लमानको पुनर्नियुक्तिलाई लिएर अर्थमन्त्री खतिवडाले के भने त्यस्तो ? जसकारण आफै बोल्नुपर्यो कुलमान
केहि दिनअघि एउटा समाचार अचानक भाइरल बन्यो । उक्त समाचार थियो कुलमान कुलामन लाई पुन: नेपाल बिद्धुत प्राधिकरणमा दोहोर्याईएको । केहि मूलधारका मिडियाहरुले समेत यो समाचार सम्प्रेसण गरेपछि कलाकारदेखि राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिदेखि जनतासम्मले घिसिङको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा राखेर बधाई दिए ।
समाचार भाइरल बनेपछि उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले कुलामन लाई नियुक्त नदिएको र यसबिषयमा कुनै प्रस्ताव नलगिएको प्रष पारे । कुलामनलाई पुन: प्राधिकरणको नेतृत्व दिनुपर्ने व्यापक दवाव दिदै आएका जनताहरु ओली सरकारसँग तब रुष्ट बने जब उनीहरुले कुलामानबारे सरकारले कुनै निर्णय नै गरेको छैन भन्ने थाहा पाए ।
तर बिहीबार सरकारको प्रस्तुति निकै अलग देखियो । सरकारको प्रवक्ताका रुपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न उपस्थित भएका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको हल्लाबारे सोधिएको प्रश्नमा ‘ठाडो’ अभिव्यक्ति दिए ।
‘उहाँलाई सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला । सरकारले चाहिँ नियुक्ति दिएको छैन । अब सामाजिक सञ्जालले दिएको नियुक्ति सरकारलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर औपचारिक प्रस्ताव पनि छैन । र त्यससम्बन्धी छलफल पनि केही भएको होइन । त्यसैले त्यो लेखाईमा, बोलाइमा वा सूचनामा कुनै सत्यता छैन’ उनले भने । खतिवडाले दिएको यो जवाफलाई लिएर फेरि पनि खतिवडा र सरकारमाथि सामाजिक सञ्जालमा विरोध भयो ।
सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले खतिवडाको अभिव्यक्ति अशोभनीय नभएको बौद्धिक बर्गको बुझाई छ । पत्रकार सम्मेलनमा मिडियाकर्मीले जस्तो प्रश्न पनि सोध्न सक्ने भए पनि जवाफ भने सीमाभित्र बसेर दिनुपर्ने बिज्ञहरु बताउँछन् ।
कुलमान घिसिङ जनताको नजरमा कुनै पार्टीको नेताभन्दा लोकप्रिय मान्छे भएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा सरकार सबैतिरबाट आलोचनामा पर्दै आएकोमा लोकप्रिय मान्छेलाई हातमा लिन सिक्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको बिश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
सरकारको प्रवक्ताको रुपमा निर्णय सार्वजनिक गर्न उभिएको मान्छेको शब्दमात्रै होइन, शैली र हाउभाउले समेत सरकारकै प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । त्यसलाई मान्ने हो भने सरकार कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा दोहोर्याउन चाहँदैन भन्ने देखिन्छ । बिहीबार खतिवडाको शैली मात्रै होइन शब्द समेत कुलमानका लागि नराम्रो थियो ।
उता खतिवडाको अभिव्यक्तिपछि यही विषयमा कुलमानले समेत आफ्नै समर्थक जनतालाई ‘निराश’ पुग्नेगरी विज्ञप्ति जारी गर्ने अवस्था समेत आयो । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुनर्नियुक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई जोडेर भ्रामक समाचार र सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरे ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएकाले सरकारको मार्गदर्शन र नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् यस अवधिमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको पनि उनले बताए ।
‘वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन एवं मार्गदर्शन, प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरु र आम उपभोक्ताको निरन्तरको सहयोग र हौसला नपाएको भए एकजना व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य, संस्थालाई मुनाफामा लैजानेलगायतका उपलब्धिहरु हासिल गर्न सम्भव थिएन,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
एकजना व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य र संस्थालाई मुनाफामा लैजाने लगायतका उपलब्धीहरु हासिल गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले सबैको प्रयासबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताए । यस्तो छ घिसिङको विज्ञप्ति
”नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३ भदौ २९को निर्णयबाट मलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।
मेरो ४ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा अर्को कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्तिको विषयलाई लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री माननीय श्री वर्षमान पुनज्यूलाई जोडेर विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्‍चारमाध्यम, सामाजिक सञ्‍जाल र मेरो गलत एकाउन्ट खडा गरी सम्प्रेषण भइरहेका भ्रामक समाचार तथा सूचनाप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारको निर्देशन एवं मार्गदर्शन र निती तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत यस अवधिमा केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् ।
लोडसेडिङको अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउन, वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन एवं मार्गदर्शन, प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरु र आम उपभोक्ताको निरन्तरको सहयोग र हौसला नपाएको भए एकजना व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य, संस्थालाई मुनाफामा लैजाने लगायतका उपलब्धीहरु हासिल गर्न सम्भव थिएन ।
सबै नेपालीको घरमा उज्यालो पुर्‍याउने, ऊर्जा खपत बढाउने, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने, प्राधिकरणभित्र सुशासन कायम गर्दै प्रभावकारी सेवा संचालन गर्न प्रणालीलाई स्वचालित र डिजिटाइजेसन गर्ने, नेपालको पानी जनताको लगानी हरेक घर विद्युतको शेयरधनी कार्यक्रमको प्रभाकारी कार्यन्वयन गर्ने, ठूला जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरुको निर्माण गर्नेलगायतका नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण निरन्तर क्रियाशील रहेको समेत जानकारी गराउँदछु ।”